इज्जत ठूलो कि छोरीको भविष्य ? |
इज्जत ठूलो कि छोरीको भविष्य ?
प्रकाशित मिति :2019-04-09 11:25:59
कैलालीकी चौध वर्षीया कुसुम आफु जत्रै उमेरको किशोरसँग भागेर गएपछि उनका आफन्तलाई खोज्न हम्मेहम्मे भयो । उनीे कसैलाई खबर नगरी घरबाट भागेर गईन् ।
दिनभरी बालिकाले आफूलाई उक्त केटाबाट छुटाए आत्महत्या गर्ने धम्की लगाइन् । उता केटाले पनि त्यसैगरी बोल्यो । ती केटाकी आमाले छोरालाई ल्याएपछि छुटाए दुबै जना मर्छन् कि भन्ने डरले घरमा आश्रय दिएको बताईन् ।
दुबै बालबालिकालार्ई स्थानीय इलाका प्रशासन कार्यलय सुखडको सहयोगमा अभिभावकलाई जिम्मा लगाइयो । प्रहरी कार्यलयमा यस्ता घटना दर्जनौं आउने गर्छन् ।
विवाहको उमेर नपुगेकालाई सम्झाई बुझाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरेको प्रहरी निरीक्षक यक्षराज जोशी बताउँछन् ।
यो घटना कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको हो । छोरीलाई राम्रो पढ्नु भनेर अर्ती दिएर भारत गएका अभिभावकले आफू उतै हुँदा ‘छोरी पोइल गई’ भन्ने खबर पाएपछि अत्तालिएर नेपाल आएको बताए ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका अधिकांश परिवारका अभिभावक कमाउन भारत गएका छन् । आमाबाबुको संरक्षणमा किशोरावस्थाका बालबालिका छैनन् ।
अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नहुँदा किशोर किशोरी नबुझी प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गरेका पाइन्छ ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायीक समिति संयोजक प्रेम कुमारी थापा मोबाईल र इन्टरनेटको सही उपयोग गर्ने तरिका अभिभावकले नसिकाउँदा बालबालिकामा गलत प्रभाव परेको बताउँछिन् ।
‘उमेर नपुगी स्र्माट फोन केटाकेटीलाई दियो, फेसबुक बनायो, कुरा गर्यो यसैले गर्दा यो विकृती फैलिएको हो । सरकारले यो पनि रोक्न सक्नु पर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘अभिभावक बालविवाह गर्नुहुँदैन भनेर सचेत भैसके तर छोराछोरीलाई प्रविधिको सही उपयोग सिकाएनन् ।’
सोही नगरपालिका वडा न. १० की १६ वर्षीया स्वस्तिमाले भागेर विवाह गरिन् । उनीहरुले भारत पुगेर घरमा विवाहको जानकारी दिए ।
परिवारका सदस्यले विवाह गरेर गएकी छोरीलाई फर्काउने सोचै राखेका छैनन् । ‘बालकै भएपनि विहे गरेर गएकी छोरीलाई घरमा ल्याउन इज्जतले दिँदैन’ बालिकाकी आमाले भनिन् ।
‘बरु आउने दशैंमा बोलाएर टिकाटालो नै गरिदिने विचार गरेको स्वस्तिमाकी आमाले बताइन् । ‘छोरीले जैले भएपनि घर खानै पर्छ २० वर्ष उमेर पुगुन्जेलसम्म सबै थाहा पाईसक्छे घर कसरी चलाउने भनेर ।’ स्वस्तीमाकी आमा गर्व गर्दै भन्छिन् ।
अधिकांशलाई बालविवाह स्वतः बदर हुन्छ भन्ने थाहा नै छैन । थाहा भएकाहरु पनि विहे गरेर गइसकेपछि फर्काउनु बेइज्जती हो भनेर उजुरी नै गर्दैनन् ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका बाल संरक्षण समितिका सदस्य सरुस्वती पौडेल अभिभावकलाई सम्झाउन खोज्दा उल्टै मुखभरीको जवाफ पाउने बताउँछिन् ।
पछिल्लाे समय नयाँ पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । इन्टरनेट मार्फत जस्ता
अश्लिल गतिविधि पनि हेरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा यौनप्रतिको चासो बढिरहेको छ ।
त्यसैको परिणाम बालविवाह बढ्दै गएको पाइन्छ ।
एक वर्ष अघि अर्को गाउँबाट कलिलै उमेरमा विवाह गरेर आएकी एक किशोरीले गएको पुस महिनामा छोरी जन्माईन् । उनलाई सानो उमेरमा घरको भातभान्सा देखि छोरीको रेखदेख समेत गर्नुपर्छ ।
श्रीमान् पढ्न विद्यालय जान्छन् । उनको पढाई रोकियो । उनले मलिन अनुहारमा भनिन्, ‘बुद्धि बिग्रियो बिहे गरें, अहिले त पढेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’
‘नगरपालिकाको बालसंरक्षण समितिको मातहतमा रहने गरि गाउँ गाउँमा बाल क्लब गठन भएका छन् । ति बालक्लबको मुख्य उद्देश्य नै बालविवाह न्यूनिकरण गर्नुु हो ।
तर, तिनै क्लबका केटाकेटी नै प्रेम विवाह गरिरहेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिका – १०, का वडा सदस्य राम प्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘उनीहरु बैठकमा आफ्ना हक अधिकार पढ्छन् र अर्को दिन भागेर बिहे गरेको पनि देखियो ।’
पछिल्लाे समय नयाँ पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । इन्टरनेट मार्फत जस्ता अश्लिल गतिविधि पनि हेरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा यौनप्रतिको चासो बढिरहेको छ । त्यसैको परिणाम बालविवाह बढ्दै गएको पाइन्छ ।
विद्यालयमा यस विषयमा खुलेर चर्चा हुँदैन । अभिभावकहरु गुजारा गर्नका लागि परदेशमा निर्भर छन् । उनीहरुको हातमा पैसा हुन्छ । मोवाइल हुन्छ । साथी हुन्छन्, सिनेमा हलहरु छन् । उनीहरुको क्रियाकलापको निगरानी गर्ने कोही हुँदैनन् । जसको कारण बाल्यकालमै प्रेम अनि विवाह बढ्दो देखिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताले बालविवाह गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेको छ । यदि गरेको भए उक्साउने समेतलाई तीन वर्ष कैदको सजाय र बीस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रष्ट लेखेको छ ।
तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय बालविवाहको उजुरी कुरेर बसिरहन्छ । उजुरी नपरेसम्म प्रहरीलाई थाह नै हुँदैन । कतिपय अभिभावकहरु यसलाई लुकाउन चाहन्छन् भने छिमेकीहरु अर्काको मामिला भनेर वास्ता गर्दैनन् ।
भारतमा रोजगारी गरिरहेका खेमराज शर्मा यसैकारण छोरी १३ वर्ष नहुन्जेल मात्रै भारतमा रोजगारी गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसपछि नेपालमै आएर कुनै व्यावसाय अंगाल्ने बताउँछन् ।
‘के गर्नु छोरीलाई एक्लै छोडेर उता गयोे यता आउँदा छोरीको व्यवहार बिग्रिसकेको हुन बेर हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘छोरीकै लागि कति सपना देखेको छु यस्तो भयो भने त सबै बर्वाद हुन्छ ।’
वडा न. १० कै लोकनाथ निरौला भारत नगए छोराछोरी पाल्न समस्या, गए छोरीहरुले नराम्रो मति लिन्छन् की भन्ने पिर हुँदाहँुदै परदेश जानु परेको बाध्यता सुनाउँछन् ।
उनले दुई छोरीलाई दिदी र आमाको जिम्मा लगाएर श्रीमतीसँगै भारतमा काम गर्छन् । छरछिमेकमा बालक छोरीले विवाह गरी भनेको सुन्दा मन अमिलो हुने उनले बताउँछन् ।
उपप्रमुख पे्रमकुमारी थापा प्रेम र विवाहको परिणाम नबुझी बालबालिकाहरु बालविवाहसम्म पुग्ने गरेका बताउँछिन् । उनको भनाइमा यसको प्रमुख कारण नै मोवाईल र अधिक स्वतन्त्रता हो ।
अहिले नैतिकता र आधुनिकताबीच ठूलो पर्खाल बनेको बताउँदै उपप्रमुख थापा यो पर्खालको बीचमा अभिभावक आफै उभिनुपर्ने बताउँछिन् । होइन भने बालापनमै गरेको प्रेमले बालबालिकाको जीवनमा मात्रै होइन देशले नै नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले अभिभावकले पहिले छोरीको भविष्य हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।